Taariikh nolaleedkii Ilaahay haka aqbalee Ibraahim C/casiis Faarax (Xandala) | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Taariikh nolaleedkii Ilaahay haka aqbalee Ibraahim C/casiis Faarax (Xandala)	Seteembar 21, 2008
Shahiidkeenna aan maanta soo qaadanayno waa mujaahid diric ahaa Ibraahim C/casiis Faarax oo Xandala ku magac dheeraa, (Xandala) inkasta oo uu ahaa mujaahid aad u da’yar laguna sheegay da’diisa 21 sano jir ah, hadana wuxuu ka tagay taariikh ballaaran, wuxuuna baal dahab ah ka galay diiwaanka jihaadka iyo mujaahidiinta casrigan.
Shahiid Xandala wuxuu ku dhashay magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan. wuxuuna ku barbaaray Beledweyn. shahiidku waxbarashadiisii wuu dhamaystay ilaa dugsiga sare, waxaanu ahaa arday tilmaaman oo lagu bartay hawlkarnimo iyo dadaal. Waxaase dabayaaqadii dugsiga sare saaqay ruuxda jihaadka iyo koryeelidda diinta Islaamka, taas ayaa aragtidiisa nolosha wax ka bedeshay, oo ku dhalisay inuu mustaqbalkiisa dib u eego, isagoo higsanaya dariiqa toosan ee Nabi Maxamed صلى الله عليه وسلمMaray.
Makii Dugsiga Sare ay uga harsan tahay hal sano ayuu u adkaysan waayey dulliga iyo fadhiga markaas ayuu iskii u joojiyey, wuxuuna u qalin jabiyey inuu gaalo jabiyo, iyo inuu difaaco oo koryeelo diinta Islaamka. shahaadadii warqadda ahayd ee faciisa oo idil sugayeen wuxuu ka raadsaday shahaado run ah oo dhiigiisa qaaliga ah lagu qoray, ujeedaduna maaha inay u furto albaabada shaqada ee waa in u furto albaabada Jannada sare Al firdows al Alaclaa, Taas oo uu dhakhso ugaaray inshaa Allaah.
Waakaa saaxiibadiisa fadhiya jabal ashuhadaa uga gacan haadinay asagoo aad moodo inuu leeyahay: (أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير )
Xandala wuxuu haybad u lahaa kasbashada cilmiga noocyadiisa kala duwan; waa deeq Allaah ku mannaystay, wuxuu ahaa wiil aqoontiisu sarayso tan diineed iyo tan maadiga ah labaduba.
Wuxuu ahaa xaafidul Qur’aan cibaado badan, oo salaatu laylka ilaaliya
Xandala wuxuu dhihi jiray, weedho lagu xasuusto oo laga reebay sida hawraartan qaali ah:
“ Waxaan jeclahay in aan qabto waxaysan dadku qaban oo la hilmaamay,” taasi oo ka hadashiineysa dareenka ku jira oo ah inuu noqdo mujadid diinta qaybaha maqan ee ku dhaqankoodii laga tagay inuu soo nooleeyo.
waxaa kaloo hadaladiisii ka mid ahaa “ Waxaa nasiib darro ah in qofku isagoo islaamka wax weyn u qaban kara uu wax yar u qabto”. Weedhan ma u eg tahay shucirkan:
Waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa nin aakhiro, oo qabri iyo qiyaame xasuusan mar aan ku booriyay guur, wuxuu igu yiri “gabdhaha xilligan way dhib badan yihiin, anigu waxaan aroosayaa Xuurul Ciin” sidaa waxaa yiri saxiibkii. Allaahna himildiisii runbuu uga dhigay markuu jihaadka ku dilay, waana halka laga helo shahiidnimo iyo xuurul ciin.
Marka raggu kulansan yahay wuxuu ahaa nin kaalintiisa ka soo baxa kuna dadaala in aan Islaamka dhinaciisa looga soo dhicin. Markii uu camalkan jihaadka bilaabay Shahiidku wuxuu la kulmay wax ku dhaw xaaladdii saxaabigii khayrka badnaa ee Muscab Binu Cumayr, Waxaynu ognahay in Muscab markii uu Nebiga صلى الله عليه وسلّم rumeeyay uu ahaa wiil quxoon, dhallinta reer makana ugu xarago badan, waalidkii iyo tolkiina ay aad u jeclaayeen, haddana wuxuu ku sabray camalka.Xandala camalkan jihaadka halgan iyo hawl adag ayuu u soo maray, wuxuu ahaa deeqsi, mid walaaladii ka mid ahi haduu wax u baahdo intii awoodiisa ah waxbuu la qaban jiray,dadkana waxaa u fadli badan kuwa dadka anfaca.
Xandala waxaa lagu xasuustaa hadal yar iyo hawl karnimo aan caadi ahayn, Haddii uu hadlana wuxuu lahaa xikmad badan, sifaadkiisa waxa ka mid ahaa wuxuu jeclaa camal kasta oo khayr ah inuu ugu horeeyo,